.: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ဘာတွေလုပ်ပေးခဲ့ဖူးလဲ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ဘာတွေလုပ်ပေးခဲ့ဖူးလဲ
၁။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ ဂျာမဏီခရီးစဉ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံက ပေးရမည့်အကြွေးကို ထက်ဝက် လျော်ပေးခဲ့တယ်။ (အမေ့စု မျက်နှာကြောင့်မို့ပါ)
၂။ လက်ပတောင်းတောင် စီမံကိန်းကြီးကို စာချုပ်ပြင်ဆင်ချုပ်ပေးနို်င်ခဲ့တယ်။
လက်ပတောင်တောင် က လယ်ပိုင်ရှင်တွေ မြေယာလျှော်ကြေးရအောင် လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။
( အရင်ပညာအရမ်းတတ်စစ်ဗိုလ်ကြီးတွေ ချုပ်ခဲ့တဲ့စာချုပ်မှာ နိုင်ငံတော်က ၄% ပဲ ရပိုင်ခွင့်ရှိရာကနေ အမေစု ပြန်လည်ပြင်ဆင်ချုပ်တဲ့ စာချုပ်မှာ နိုင်ငံတော်က ၄၀ % ရပိုင်ခွင့်ရှိသွားတယ်။ ( ဒီနေ့ ဝန်းထမ်တွေ လခတွေတိုးရနေတာ အမေစုရဲ့ ၄၀% ကငွေတွေကြောင့်ဆို ဘယ်သူ ငြင်းမလဲ။))
၃။ သူကိုယ်တိုင် ထိုးထားတဲ့ အင်္ကျီလေးတွေကို ရောင်းပြီး ပညာရေးကွန်ယက် ထူထောင်ပေးခဲ့တယ်။
(နှစ်ပေါင်း ၆၀ လုံးလုံး ဘယ်ခေါင်းဆောင်ကများ ရှိတာရောင်းပြီး ပြည်သူ့ပညာရေးကို စဉ်းစားပေးခဲ့ဖူးလို့လဲ)
၄။ စုမေတ္တာ ဆေးပေးခန်းလေး တည်ဆောက်ပေးခဲ့တယ်။ (အရင်အစိုးရလက်ထက်ကဆိုရင် ဆေးပေး
ခန်း မပြောနဲ့ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှာတောင် ဆေးစုံမရှိဘူး)
၅။ စုဖောင်ဒေးရှင်း တည်ထောင်ပေးပြီး ပြည်သူတွေ ကျမ္မာရေး ပညာရေးအတွက် အသုံးပြုဦးမယ်။
(ဦးသိန်းစိန် ဖောင်ဒေးရှင်းရယ်လို့ အရင်ကလည်း မကြားမိဘူး၊ ခုလည်း မကြားပါဘူး၊ နောင်လည်း ကြာရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူက လိမ်မော်ခြံနဲ့ မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်ပဲ အာရုံကျနေတာဆိုတော့ ... ထားပါလေ)
၆။ ဒေါ်ခင်ကြည်ဖောင်ဒေးရှင်း တည်ထောင်ပေးပြီး ရွှေ့ရှားစာကြည့်တိုက် ဖွင့်ပေးထားတယ်။
(ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်မှာ ကိုယ်ပိုင်စာကြည့်တိုက်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်။ သူတစ်ယောက်တည်းဖတ်ဖို့ပါ။ အမေစုလိုပြည်သူကို စာတတ်စေချင်စိတ်ကတော့ ဘယ်ဝန်ကြီး၊ ဘယ်သမ္မတ မှာမှ မရှိပါဘူး။ သူတို့ပဲ စာတတ်၊ သူတိုပဲ လူလည်လုပ်ပြီ အုပ်ချုပ်ချင်နေကြတာလေ။ ဦးရဲထွဋ် ရဲ့ ဖေ့ဘုပ်မှာ အညာက ကလေးတွေ နွားကျောင်းနေတဲ့ ပုံတို့၊ အညာသူ အစ်မကြီး သွားဖြီးဖြီးလေးနဲ့ ဈေးရောင်းနေတဲ့ ပုံတို့ မကြာခဏ တင်လေ့ရှိတယ်။ ခေါင်းစဉ်က အညာသူတို့ရဲ့ ရိုးရှင်းသောအပြုံးတို့၊ အညာဓလေ့တို့ ၊ အညာညနေခင်းတို့ စသဖြင့် ခေါင်းစဉ်လှလှလေးတွေနဲ့တ
င်တယ်။ Like သောင်းနဲ့ချီပြီးရပါတယ်။ တကယ်တော့ အညာဓလေ့ကို ချစ်လို့တင်နေတယ်လို့ မယူဆပါဘူး။ ငါတို့စစ်တပ် နှစ်၆၀ အုပ်ချုပ်ခဲ့တာ အညာသူတွေ ဘာမှ မသိတော့ဘူး။ ဈေးရောင်း နွားကျောင်း ပဲ သိကြတော့တယ် ဆိုပြီး တဘက်လှည့်နဲ့ ဂုဏ်ယူ ပျော်ရွှင်နေမယ် လို့ ယူဆပါတယ်။ သိပ်မကြာသေးခင်က သူ့ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံမြင်လိုက်ပါသေးတယ်။ ချင်းပြည်နယ်ရောက် ဗမာတစ်ယောက
တဲ့။ စစ်အာဏာရှင် လက်ထက်မှာ လက်နက်မကိုင်တာ ဆိုရင် ချင်းပဲရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်နက်မကိုင်တဲ့ပြည်နယ်ရော တိုးတက်လားဆိုတော့ ပြည်နယ် နှင့် တိုင်း ၁၄ ခုထဲမှာ ချင်းပြည်နယ်
ကဖွံ့ဖြိုးမှု နောက်အကျဆုံးတဲ့။ အဲ့ဒီချင်းပြည်နယ်ရောက် ဗမာတစ်ယောက်က ချင်းပြည်နယ် တိုးတက်
ဖို့သွားကြည့်တာတော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူး။ ငါတို့စစ်တပ် လုပ်ခဲ့တဲ့ မတိုးတက်ဆုံး ပြည်နယ်လေးကို သွားကြည့်ဦးမယ် ဆိုပြီ ဂုဏ်ယူနေတာ.ဖြစ်မှာပါ။)
၇။ နိဗယ်ဆု က ရတဲ့ ဒေါ်လာ ၁၃ သန်းကို ပြည်သူတွေ ပညာရေးနဲ့ ကျမ္မာရေး အတွက် အကုန်သုံးခဲ့တယ်။
(အမေစုက သူကိုယ်တိုင်လည်း ပညာကိုတန်ဖိုးထားသလို ပြည်သူတွေကိုလည်း စာတတ်စေချင်တာ သူ့လုပ်ရပ်တွေက သက်သေပဲ။ ဒါနဲ့ စကားမစပ် အဘ ဖောင်ဒေးရှင်း ပညာရေး ကွန်ယက် ဆိုတာလေး မြင်ဖူးချင်စမ်းပါဘိဗျာ)
၈။ မြန်မာ့ ပညာရေး တိုးတက်စေဖို့ မြန်မာ့ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ တွေ့နိုင်ဖို့ စီစဉ်ပေးခဲ့တယ်။ တွေ့ပေးခဲ့ပြီ။ (ဒါလည်း ပညာရေးပဲ)
၉။ လွှတ်တော်ထဲမှာ ဝန်ကြီးတစ်ပါးပြစ်တဲ့ အမှိုက်ကို ကောက်ပေးခဲ့ဖူးတယ်။
( အမှိုက်ကောက်တဲ့ အဓိပ္ပါယ် က ရှင်တို့ပြောတော့ စည်းကမ်းပြည့်ဝတဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသစ်ကြီးဆို ။
ခေါင်က မလုံပဲ တံစက်မြိတ်က ဘယ်လိုလုပ်လုံမလဲ.(ဗျမ်း) နားရင်းအုပ်ပြီး ဆုံးမ လိုက်သလိုပဲ ။ အဲ့တစ်ခါဆုံးမ ပြီး နောက်ပိုင်း ဘယ်ဝန်ကြီးမှ အမှိုက်မပစ်ရဲတော့ဘူး။)
၁၀။ ကျနော်တို့ ပြည်သူတွေကို ယူနီဖောင်းချွတ်တွေ လိမ်နေသမျှ ကမ္ဘာသိအောင် ချပြပေးခဲ့တယ်။
(ဟိုလူကြီးတွေဘက်ကတော့ ကမ္ဘာပတ်ပြီး အတင်းပြောတယ်လို့တောင် သမုတ်တာခံရပါတယ်။)
၁၁။ လွှတ်တော်ထဲက တပ်မတော်သားကိ်ုယ်စားလှယ်တွေကို ထမင်းဖိတ်ကျွေးဖူးတယ်။
(အရက်နဲ့ ကာရာအိုကေ မပါလို့တဲ့ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ် တွေက လာမစားဘူး။ ဦးလှဆွေ တင်တဲ့ post အရ သိရတာပါ။)
၁၂။ မြန်မာ့ပညာရေး မြင့်မားစေဖို့ အဆင့်မြင့် ပညာရေးဥပဒေ ရေးဆွဲပေးခဲ့တယ်။
၁၃။ ခင်ဗျားတို့ ကျနော်တို့ကို စစ်အာရှင်တွေ နှိပ်စက်နေတုန်းက အမေစုက အသက်နဲ့ ရင်းပြီး အံတုပေးခဲ့တယ်။ (သမိုင်းတွေက သက်သေပါ။)
၁၄။ စစ်တပ်ကြီးက ချုပ်ကိုင်ထားတဲ့ ပုဒ်မ ၄၃၆ ကိုပြင်နိုင်အောင် ကြိုးစားပေးခဲ့တယ်။
(အာဏာရှင်တွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း လက်မလွှတ်ချင်ကြသေးပေမဲ့ တစ်နေ့တော့ အောင်မြင်မှာပါ)
၁၅။ ကော့မှူးမြို့မှာ အချက်အပြုပ် သင်တန်းကျောင်းလေး ဖွင့်ပေးထားပါသေးတယ်။
လူငယ်တွေရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာရပ်တစ်ခုပေါ့။ သင်တန်းတက်နေတဲ့သူတွေ အကျိုးရှိနေ
၁၆။ ခင်ဗျားတို့ ကျနော်တို့ သိပ်ချစ်ခင်လေးစားရတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ နှစ်၁၀၀ ပြည့်ပွဲကို စည်းစည်းကားကား နေရာတော်တော်များများမှာ ကျင်းပပေးခဲ့ပါတယ်။
(အစိုးရ အလိုအတိုင်းဆို ကျင်းပပေးဖို့ ဝေလာဝေး။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဆိုရင် အသံတောင် ကြားရဲကြမှာအဟုတ်ဘူး။ အမေစု လုပ်မှ လွှတ်တော်ထဲမှာ အစီအစဉ်မရှိပဲ ထလုပ်ကြတာပါ။)
သူ့မှာ ရှိသလောက်လေးနဲ့ သူရထားတဲ့ ဆု ၁၁၄ ခု ရဲ့ သူရဲကောင်းဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်လေးကို အားကိုးပြီး ပြည်တွင်းပြည်ပ အလှူခံလို့ရတာလေးနဲ့ လက်လှမ်းမှီသလောက် ပြည်သူကို အကျိုးပြုနေတာပါ။ နည်းတယ်လို့တော့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။ အမေစုက ပြည်သူတွေရဲ့လယ်တွေ ခြံသိမ်းယူပြီး စီးပွားရေးလုပ်နေ
တဲ့ ခရိုနီ ဝန်ကြီးတွေလိုမှ မချမ်းသာတာဗျာ ။ ဟုတ်ဘူးလား နော...
မှတ်ချက်။ ။ ပြည့်သူငွေကို ဗုန်းဘောလအောသုံးပြီး တံတားဆောက်လိုက်၊ လမ်းခင်းလိုက်၊ အမေရိကန်
ကလော်ဘီငှါးပြီး ကြွားလုံးထုတ်လိုက်လုပ်နေတဲ့ အစုိးရနဲ့တော့ မယှဉ်ပါနဲ့။ အစိုးရလုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့ ပြည်သူတွေရဲ့ ငွေတွေနဲ့ပါ။.ငါးကြင်းဆီနဲ့ ငါးကြင်း ပြန်ကြော်ပေးနေတာပါ။ အမေစု သမ္မတ ဖြစ်ရင် ဒီအစိုးရထက် ၁၀ဆ မက ပြည်သူတွေကို တိုးတက်စေမှာပါ။
သူနိုင်သလောက်လေး လုပ်ပေးနေတာ ကျနော်တို့ပြည်သူတွေကို သိပ်ချစ်လွန်းလို့ပါ။
ဒါကြောင့် နိုဝင်ဘာ ရွေးကောက်ပွဲကြရင် အမေစုပါတီကို မဲထည့်ကြပါလို့ နိုးဆော်လိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ။